जीवन र मृत्युको लडाईलाइ अंगालोमा हालेर हिड्ने बिचारी यी २९ वर्षिय कुमारी, यस्तो छ कहाली लाग्दो कथा ( उपचारको लागि सक्दो सेयर गरि सहयोग गर्नुहोस )
तपाईको नाम केहो ? भनेर मैले सोध्न नपाएँदै एकै लयमा जवाफ आउँछ, नमस्ते मेरो नाम कुमारी निरौला हो । मेरो घर पाँचथर जिल्लाको मौवा गाविसमा पर्छ ।तपाई कति वर्षको हुनुभयो नी ? मेरो अर्को प्रश्नमा उनले अलि रोकिएर भनिन् २९ वर्ष ।
पाँचथर जिल्ला साविकको मौवा गाविस घर भएकी कुमारी निरौला अहिले विर अस्पतालमा उपचाररत छिन् । उनको घाँटीमा ट्युमर छ, त्यसकै शल्याक्रियाका लागी उनि २ वर्षदेखि विभिन्न अस्पताल धाइरहेकी छिन् । परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकी निरौलाको उपचारका लागी राजधानीका केही समाजसेवीहरुले आर्थिक जोहो गरिरहेका छन् ।
आफु १२ वर्षको हुँदा नै ट्युमर हो भन्ने थाहा पाएपनि पैसा अभावमा उपचार गर्न नसकेको उनले बताइन् । उनि भन्छिन्, मेरो बुवा वितेको पनि १५ वर्षजति भयो, अंकलहरुलाई उपचारका लागी अस्पताल लगिदिनुहोस् भन्दा सुनेपनि नसुनेझै गरे ।
आफुले विद्यालयको मुखै नदेखेको बताउने निरौलाले भनिन्, घरखर्च चलाउन र भाइबहिनी पढाउन्, अर्कोको मल, दाउरा घास बोक्ने काम गर्थे । उनको घाँटीमा ठूलो ट्युमर छ, २ वर्षअघि सानो शल्यक्रिया गरेर केही सहज बनाइएपनि ट्युमर फेरी बढ्न थालेपछि, उपचारमा समस्या हुने पो हो की भनेर चिन्ता हुने गरेको उनि बताउँछिन् । उनले २ वर्षअघि टिचिङ अस्पतालमा पहिलोपटक ट्युमरको शल्यक्रिया गरेको बताइन् ।
अहिले उनि राजधानीमा आफ्नो माइजुको दिदीको घरमा बसेर अस्पताल धाइरहेकी छिन् । शल्यक्रिया गर्नुभन्दा पहिले विरामीको आफ्नो मान्छेले मञ्जुरीनामा पत्रमा सहि गर्नुपर्ने हुन्छ, कुमारी भन्छिन्, यसकालागी पनि मेरा अंकलहरु अस्पतालसम्म आईदिएनन् ।
भक्ति दर्शन टेलिभिजन मार्फत दीपीका श्रेष्ठ, हिमा शर्मासँग सम्पर्क भएपछि उहाँहरुले नै अहिले उपचारमा सहयोग गरिरहेको उनले बताइन् । यहि माघ २६ गते कुमारी ट्युमरको शल्यक्रिया गर्न अस्पताल भर्ना हुँदैछिन्, २८ गते उनको शल्यक्रिया छ तर शल्यक्रियाका लागी चाहिने पैसा उनिहरुसँग जम्मा भइसकेको छैन्, कुमारी भन्छिन्, दाई दिदीहरुले पैसा संकलन गरिरहनुभएको छ, शायद अप्रेशन हुन्छ, होला ।
यदि तपाईको सानो सहयोगले कसैले नयाँ जिवन पाउँछ भने, किन सहयोग गर्न पछि हट्ने
कुमारी निरौलाः ९८६२७६१४१८
बसन्त खण्डेल्वाः ९८१८४८१३२९
दिपीका श्रेष्ठः ९८५१२३५१४०
गोरा भएर जन्मदाको कहाली लाग्दो पीडा,सेता भुत भन्दै गिज्याउछन, थुक्छन, रुदै सुनाए मन रुवाउने कुराहरु(भिडियो सहित)